Red Hat Inotangisa Nyowani Managed Cloud Services | Linux Vakapindwa muropa
Red Hat nguva pfupi yadarika yakafumura seti nyowani yegore services nokudaro ichiwedzera sarudzo yevatengi yeakavhurika hybrid gore komputa, kudzikisira kuomarara uye kuwedzera zviwanikwa zveIT.
Nemasevhisi matsva aya portfolio yayo inowedzera ayo akavhurika masanganiswa ehoridhe matekinoroji nemasevhisi matsva akagadziriswa gore, Red Hat OpenShift API Management, Red Hat OpenShift Mipata yeApache Kafka, uye Red Hat OpenShift Data Science Izvo zvakagadzirirwa kupa zvakazara zvinodzorwa uye zvakagadziriswa mushandisi ruzivo kumasangano anogadzira, kuendesa, maneja, uye kuyera gore -zvizvarwa zvekushandisa munzvimbo dzakaomeswa.
Aya masevhisi zvakanyatsobatanidzwa neRed Hat OpenShift Dedicated uye kubatsira kudzikisira mashandiro ekushanduka kwenzvimbo dzakaomarara dzeIT dzazvino pasina kupa zvibayiro mugadziri nekupa yakajairika seti yezvinokwanisa kuyera hupamhi hweyakavhurika uye yakawanda-gore gore rakasanganiswa.
Iwo masevhisi matsva anosanganisira:
Red Hat OpenShift Hova dzeApache Kafka, yakagadzirirwa kuti zvive nyore kugadzira, kutsvaga, uye kubatanidza kune chaiyo-nguva data hova, zvisinei nekwako nzvimbo.
Kubva pane iyo Apache Kafka yakavhurwa sosi chirongwa, Red Hat OpenShift Makwara eApache Kafka zvinoita kuti zvive nyore kumatimu ebudiriro kusanganisa dhata rekushambadzira mumashandisirwo avo. Paunenge uchigadzira hybrid gore kunyorera, dhata dzinoyerera ndiwo musana wechiitiko kutora, kutaurirana, uye kugadzirisa kwezvazvino, zvakagoverwa zvekuvaka zvivakwa.
Yechokwadi-yenguva dhata chikamu chakakosha chekuti mashandisirwo egore mafomu anoshanda sei, ichipa zvinoitika zvechimbi-chimbi zvemadhijitari, zvisinei nekwaya kupihwa sevhisi. Seyakachengetedzwa zvizere uye inogarwa seKafka sevhisi, Red Hat OpenShift Mitsetse yeApache Kafka inobvumira vanogadzira kuti vatarise pakuvaka zvirinani mashandiro nekukurumidza.
Red Hat OpenShift Dhata Sayenzi kupa masangano nzira yekuvandudza, kudzidzisa, uye kuyedza muchina kudzidza (ML) mamodheru nekukurumidza uye kuatumira iwo mumudziyo-wakagadzirira fomati.
Izvo zvinoenderana neiyo Open Data Hub chirongwa open source uye inobatsira kumhanyisa muchina kudzidza modhi kuvandudza, kudzidzisa, uye kuyedza pasina zvivakwa zvinoenderana nezvinodiwa. Red Hat OpenShift Data Science inoshandisa zvakajairika data sainzi maturusi senheyo yeAI-se-a-Service chikuva chakabatanidzwa nemasevhisi masevhisi kubva kune vakasarudzika vadyidzani, kusanganisira Red Hat Musika Musika ISV mhinduro.
Red Hat OpenShift API Management iyo inokasira iyo nguva yekukoshesa uye inoderedza mashandiro ekushandisa ekuendesa API-based application uye microservices. Inopa yakazara application programming interface (API) lifecycle manejimendi yeRed Hat OpenShift Yakazvitsaurira uye Red Hat OpenShift Service paAWS.
Kubatanidza Maitiro Ekutungamira neNative OpenShift Kubatanidzwa inoita kuti makambani atarise pane hunyanzvi uye kusimudzira mukusika, manejimendi uye nekuwedzera kwekushandisa API-centric uye microservices-yakavakirwa kwete pane zvigadzirwa-zvakavakirwa. Red Hat OpenShift API Management zvakare inogonesa vatengi kugadzira yavo yega manejimendi chirongwa, ine kugona kudzora kupinda, kuongorora mashandisirwo, kugovana zvakajairika maAPIs, uye kusimudzira kwavo kunongedzera kwekushandisa kuburikidza nepombi.
Aya matsva akakwanisa gore masevhisi anovaka pane iripo Red Hat OpenShift portfolio, iyo inopa inozvibata-inogadziriswa uye yakazara zvakazara Kubernetes pamazhinji makuru eruzhinji makore.
Ichi inogonesa Red Hat vatengi uye vanobatirana navo kuvaka yakavhurika yemasanganiswa gore dhizaini inoenderana neKubernetes bhizinesi chikuvazvisinei nezvinhu zvemunharaunda zvivakwa kana vashandi vanoshanda. Red Hat OpenShift Dedicated, chikumbiro chekusimudzira chikuva chakanyatso kutarisirwa neRed Hat uye chakachengetwa paAmazon Web Services (AWS) kana Google Cloud, inosanganisira manejimendi uye kubatanidzwa kwetekinoroji yezvinhu zveinotungamira bhizinesi reLinux chikuva, Red Hat Enterprise Linux, uye masevhisi. senge network,
Pamusoro peOpenShift Yakazvitsaurira, Red Hat OpenShift pane IBM Cloud, Red Hat OpenShift Service paAWS, uye Microsoft Azure Red Hat OpenShift inowanikwa seyakabatanidzwa inotsigirwa uye inotarisirwa masevhisi eOpenShift, inowanika seyegore-yemuno koni yezvipiriso pane avo vanoita gore vanopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Red Hat yakaunza masevhisi matsva akachengetedzwa masevhisi